प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न : पार्टीभित्र समस्या भयो भन्दैमा संसदमाथि आक्रमण गर्ने ? - Kohalpur Trends
१७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र देवले प्रधानमन्त्रीले आफू समस्यामा परेपछि मुलुकलाई नै खाल्डोमा हाल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले पार्टीभित्र समस्यामा परेपछि प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित निकाय संसदमाथि आक्रमण गरेको बताएका हुन् ।
‘तपाईलाई पार्टीभित्र समस्या भयो, तपाईलाई पार्टीभित्र कसैले काम गर्न दिएन । यो देशको समस्या होइन, यो तपाईको समस्या हो’ उनले भने, ‘कि त तपाईले पार्टीभित्र विश्वास कायम गर्न सक्नुप¥यो, कित अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर अर्को नेता बनाउनुप¥यो । तपाई पार्टीभित्र समस्यामा पर्ने अनि पार्लियामेन्ट (संसद) मा आक्रमण गर्ने ? देशलाई खाल्डोमा जाकिदिने ?’
नेता देवले दुनियाँको कुनै पनि देशभक्त, अग्रगमन चाहने, जनताको प्रतिनिधि हामी नै हौं भन्ने व्यक्तिले संसदमाथि आक्रमण गर्न नसक्ने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्रीको कदमका कारण देश ठूलो राजनीतिक दुर्घटनातर्फ गएको पनि उनले बताए । संसद विघटनलाई नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक रुपमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको पनि बताए । यसको ब्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने र त्यसलाई स्वीकार गर्ने देवले राष्ट्रियसभालाई जानकारी गराए ।
संसद जनप्रतिनिधिमूलक निकाय भएकाले कार्यकारिणीले आक्रमण गर्न नपाओस् भनेर संविधानमै यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे ‘हाम्रो व्यवस्था संसदको सर्वोच्चता हो कि प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता हो ?’
Previous Previous post: सिडियोले व्यापारीलाई भने, तस्करी रोक्ने हो ?
Next Next post: जसपा र नेकपा एकीकृत मार्क्सवादीबीच पार्टी एकता